Ikhibhodi eNtsha yoMlingo enesazisi sokuchukumisa | Ndisuka mac
Ikhibhodi eNtsha yoMlingo ene-ID yokuChukumisa
Umsitho we-Apple ka-Epreli 20, phakathi entwasahlobo, ibe ngumboniso wombala kunye nezixhobo ezitsha ezivezwe yinkampani. Siyavuma ukuba uninzi lwamahemuhemu luzalisekisiwe, kodwa inkampani isimangalisile ngesixhobo esitsha. Umzekelo, usibonisile ngekhibhodi entsha yoMlingo eneTouch ID eza kwiinguqulelo ezimbini.
Kunye neMac entsha ekudala ilindelwe eyayilindelwe ngabasebenzisi bonke, ikhibhodi entsha ibethe iivenkile zakwa-Apple. Kubonakala ngathi ayinamsebenzi kodwa sithetha ngokuhlaziywa kweKhibhodi yeMicrosoft engazange ihlaziywe kwiminyaka embalwa edlulileyo.
Inkampani ityhila ikhibhodi entsha yomlingo enemibala emitsha, isazisi sokuchukumisa, kunye nezitshixo ezitsha ze-emoji, ukujonga, ukungaphazamisi, kunye nokutshixwa kweMac yakho.
Umda ngoku uhamba kunye neekhompyuter ezintsha nazo zibonisiwe kwii-shades zazo, ukongeza ekwamkeleni imilo ejikeleze ngakumbi. Inguqulelo ethe yathengiswa ngokuqinileyo kude kube ngoku, yabhaptizwa njengeKhibhodi yesiMlingo yesi-2, yasungulwa ngo-2015, ukusukela ngelo xesha ihleli ngaphandle kohlaziyo.
Kunye neeKhibhodi zoMlingo, iApple iphinda ihlaziye iMouse yeMagic kunye nephedi yokulandelela ukuze ibandakanye ukhetho lombala olongezelelweyo. Nangona iApple iza kubonelela ngeKhibhodi yeMicrosoft kunye neMouse yeMicrosoft ngeMac entsha, akucaci ukuba zingakanani iindleko ezihlaziyiweyo eziya kubiza xa zithengwa ngokwahlukeneyo.
Kuya kufuneka silinde ukuze sibone ukuba yeyiphi intengo inkampani ebeka kwezi zinto xa zithengwa ngokwahlukeneyo. Ndiyathemba ukuba abanyuki kakhulu emdiliyeni, njengoko besitsho, kwaye ihlala inexabiso elifanayo nathi ebesinalo kude kube ngoku kunye neemodeli zangaphambili.
Ngokuqinisekileyo, yenye yezona zibhodi zibalaseleyo iApple inayo. Ilula, intle kwaye intle kakhulu kwaye ngoku iyasebenza kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ikhibhodi eNtsha yoMlingo ene-ID yokuChukumisa
I-watchOS 7.4 kuhlobo lwayo lokuKhululwa kwabaFundi ngoku iyafumaneka